Amend the format of - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: amend the format of the full text (Engels - Burmees)
The format of the disc image could not be identified
ခွေ၏ပုံရိပ်ဖိုင် ပုံစံအား အမျိုးအစားမသတ်မှတ်နိုင်
The full extent of the spread is uncertain, due in part to limited testing.
စစ်ဆေးမှုများ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ရောဂါပျံ့နှံ့မှု အတိုင်းအတာ အပြည့်အစုံကို သေချာစွာ မသိရှိရသေးပါ။
Countries also differ in their testing and reporting practices, so comparisons of the number of reported cases do not tell the full story of how the epidemic has progressed in different areas.
နိုင်ငံများစွာတွင် ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများတွင်လည်း ကွဲပြားမှုများရှိနေသောကြောင့် ထုတ်ပြန်သည့် ကူးစက်မှုအရေအတွက်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် ဒေသအသီးသီးတွင် ကပ်ရောဂါ မည်သို့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်ဟူသည့် ဖြစ်ရပ်အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြမပေးနိုင်ပါ။
ဤလေ့လာမှုသည် မတူညီသော အချက်အလက်ရင်းမြစ်များကို ပေါင်းစပ်လေ့လာသည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇအစအဆုံး၏ 86.3% ခန့် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဇီဝဖွဲ့စည်းမှုအကျိုးဆက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် လူတို့၏ အနာရောဂါကုနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့် ရပ်တည်သည်။
မေတ္တာချင်းထုံးဖွဲ့၍၊ ခမည်းတော်ဘုရားနှင့် ခရစ်တော်၏ နက်နဲသောအရာကို နားလည်နိုင်သော ဝိစိကိစ္ဆာနှင့် ကင်းစင်သော ဥာဏ်၏စည်းစိမ်အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ စိတ်နှလုံးသက်သာစေမည်အကြောင်း အဘယ်မျှလောက်ကြီးသော တိုက်လှန်ခြင်းကို ငါခံရသည်ဟု သင်တို့သိစေခြင်းငှါ ငါအလိုရှိ၏။
mancis (Maleis>Engels)sei stupenda (Italiaans>Frans)ad victoriam, ex machina, non sibi sed patriae (Latijn>Engels)he aha te kupu maori mo can u get my (Maori>Engels)altre marche (Italiaans>Duits)lainespektrid (Estisch>Engels)hoofdje pikken (Nederlands>Duits)fly high with the angels (Engels>Maori)kohlehydrat (Duits>Frans)a chi eto (Wels>Engels)lihat (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))are you okay (Engels>Spaans)rectangle to ilocano (Engels>Tagalog)godzin (Pools>Grieks)naka noa na (Maori>Engels)threadfin (Engels>Duits)tucur (Latijn>Italiaans)crush kita (Tagalog>Spaans)berika fruit (Tamil>Engels)adiestrada (Spaans>Kroatisch)en la nevera (Spaans>Grieks)feuille de rosier (Frans>Latijn)grano cotto (Italiaans>Engels)kichapo maridadi (Swahili>Engels)lavada kabal meaning (Engels>Tamil)